News | Local Resources Centre | Page 2
အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်ရန် တရားဝင်လျှောက်ထားခွင့်ရှိတာကို သိပြီးပြီလား?
အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်ခြင်းခွင့်ပြုလွှာကို တရားဝင်အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများနဲ့ ပြည့်စုံစွာတင်ပြပြီး သားကြောဖြတ်စီစစ်ရေးအဖွဲ့ထံတင်ပြလို့ရနေပါပြီ။ ဒီလိုလျှောက်ထားရာမှာ အရင်ကထက် ပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူအောင် လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြေလျော့ပေးထားတယ်လို့
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာသည် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သော ရောဂါဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးကင်ဆာရောဂါများအကြား ၂၅% မှ ၃၀% သည် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်သည်။
LRC newsletter Vol 8 English & Myanmar Version
Newsletter Vol 8 ENG Newsletter Vol 8 BURM
Christian Aids (မြန်မာ)၏ ရန်ပုံငွေအထောက်အပံ့ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့မှ တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော “အားလုံးပါဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သက်သေအထောက်အထားနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု”
ဖွံ့ဖြိုးရေး မဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ (Local Resource Centre – LRC) မှတဆင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမှီရရှိရေး ရန်ပုံငွေ (Access to Health Fund) ပံ့ပိုးထားတဲ့ လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်တဲ့ “Solidarity of Trade Union Myanmar- STUM”အဖွဲ့မှ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေသည့် စက်ရုံလုပ်သားများအတွက် နှာခေါင်းစည်းနဲ့ ပိုးသတ်လက်ဆေးရည်ထုတ်လုပ်နည်းသင်တန်းများပေးပြီး လိုအပ်သည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးကူညီပေး
[English below] ကိုဗစ်၁၉ ကြောင့် ရွှေပြည်သာ၊ အင်းစိန်၊ မင်္ဂလာဒုံနဲ့ လှိုင်သာယာမှာရှိတဲ့ စက်ရုံတွေ ပိတ်ထားရခဲ့ပါတယ်။
Local Resource Centre(LRC)နှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း (Border Areas Development Association (BDA)မှ Access To Health ၏ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် အိမ်ယာမဲ့ ကလေးတွေနဲ့ မိသားစုများ ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ဘေးကင်းစွာနေထိုင်နိုင်အောင် ပံ့ပိုးကူညီပေး
ကိုဗစ်၁၉ ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ မိသားစု အတော်များများ အပြင်မထွက်ပဲ အိမ်မှာနေနိုင်ပေမယ့် နားခိုစရာ အိမ်ရယ်လို့ မရှိသူတွေကော ဘယ်လိုနေကြပါသလဲ။
လူငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံများ ပိုသိရှိလာစေရန် အစည်းအဝေးကို အားသစ်ရောင်ခြည်အဖွဲ့မှ ဉီးဆောင်ပြုလုပ်
လူငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံများ ပိုသိရှိလာစေရန်နှင့် ရရှိထားသော အသိပညာဗဟုသုတများ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိရန်
လိင်မှုဆိုင်ရာ၊ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့် အခွင့်အရေးများအကြောင်း မီဒီယာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အတွက် သင်တန်းသားလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
လိင်မှုဆိုင်ရာ၊ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့် အခွင့် အရေးများအကြောင်း မီဒီယာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက် သင်တန်းသား လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ (Local Resources
လူငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံများ ပိုသိရှိလာစေရန်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်
Dragon Youth Network အဖွဲ့မှ ကရင်ပြည်နယ် ကျော့ရွာ၌ လူထုတွေ့ဆုံပွဲတစ်ရပ်ကျင်းပ
ပြည်သူများ ပါဝင်ပူးပေါင်းပြီး ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တစ်ရပ် ဖြစ်ထွန်းလာစေရေးစီမံချက်ဖြင့် အောက်တိုဘာလ ၂၅ရက်နေ့ ၊ ကျော့ရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း၌
Regional Coordination and Adhoc meeting in Dawei, Tanintharyi Region.
Network Coordination Meeting in Nothern Shan State.
Network Coordination Meeting in Nothern Shan State. #CivicEngagement #PEACE_Project #Helvetas